War Deg-deg ah;Taageerayaasha Trump oo xoog ku galay Aqalka Congresska – – AfmoNews
War Deg-deg ah;Taageerayaasha Trump oo xoog ku galay Aqalka Congresska –
Wararka ka imanaya dalka Maraykanka ayaa sheegaya in taageerayaasha Madaxweynaha Maraykanka Donald Tump ay xoog ku galeen gudaha Aqalka Congresska ee Capitol iyadoo halkaa ay ka socotay ku dhowaaqista cidda ku guuleysatay doorashadii Maraykanka ka dhacday 3dii November 2020.
Mudanayaasha labada aqal ee Maraykanka iyo saxafiyiintii halkaa ku sugneyd ayaa laga bixiyay iyadoo la geeyay goobo ammaan ah.
Kulankan oo ay yeelanayeen labada aqal ee congresska Maraykanka ayaa lagu waday in si rasmi ah loogu dhowaaqo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada Madaxtinimada Maraykanka.
Donald Trump oo qudbad u jeediyay taageerayashiisa waxyar kahor inta aysan u dhaqaaqin Aqalka Congresska ayuu u sheegay inusan weligii aqbali doonin in loogaga guuleystey doorashadii 3dii November isagoo ku tilmaamay mid qayaano ahayd.
Madaxweyne ku xigeenka Trump oo guddoomin lahaa kulankan ayaa waxa uu Donald Trump ka codsaday inuusan aqbalin natiijada doorashada,hase yeeshee Mike Pence ayaa sheegay in uu u hoggaansami doono natiijada.
Kala soco jowhar.com wixii ku soo kordha xaalka ka taagan Washington.
taageerayaasha trump oo weeraray aqalka cad